Ndị na - emepụta Ngwa & Ndị Na - emepụta Ngwaahịa China
Aluminium Silicate Silica Mullite Fire Brick Cement Kiln Refractories Ihe eji eme ya
Elu sic refractory ihe eji eme silikon carbide ramming uka maka mkpuchi oku
Ihe a na-akpọ brik magnesium aluminom na-eme ka brik na-eme ka ihe na-acha uhie uhie jupụta
ihe eji egbu okpu ulo mmeghe
Magnesia alumina spinel brik bụ ụdị brik alkali refractory brik, a na-agwakọ simenti nke na-eme ka ọ bụrụ ihe eji agbanye mmiri, nke a na-eme ka ọ bụrụ amorphous refractory eji maka ihe njikọ yana akwara dị n'ime. Usoro mmepụta nke birnesite refractory brik bụ nke nwere usoro na usoro mmepụta nke biriki magnesia na-ahụkarị, Agbanyeghị, ọkwa nke granule dị na bat ahụ mejupụtara spel sinet sinet ma ọ bụ na-eme ka ọ bụrụ ihe na-acha ọkụ, ma ọ bụ ngwakọta nke abụọ.
Akọrọ Mgbapụta Mass Magnesia Powder Refractory N'ihi Friace Midate Channel
Magnesia Ramming Mass Mix Okwu Mmalite
Ngwakọta magnesia ramming bụ ụdị alkali amorphous refractory nke emere na magnesia electro-fused ma ọ bụ magnesia mejọrọ ka ọ bụrụ nchịkọta, gbakwunye mgbakwunye superfine ntụ ntụ na ntinye.
Eletriki igwe na-ere ọkụ dị elu alumina refractory castable
A na-akpọkwa ọkụ eletriki a na-akpọ oku a na-akpọ elektrik arc, nke bụ ihe nchara na-arụ ọrụ nke igwe na-agba n’etiti etiti na mpaghara eletriki ya na ihe ọkụ ahụ dị ka isi iyi ọkụ. A na-eji ya agbaze nchara nchara. Steeldị nchara na igwe eji arụ ọrụ, ụdị ọkụ eletrik na-ekpebi ihe dị n’ime ya, igwe eletriki a na-eme site n’okpo ọkụ dị elu, mgbidi dị ọkụ, ala a na-ete n’ọkụ na ebe a na-akụ taị, taa anyị ga-ekwu maka prefabricated refractory nke ejiri n’elu igwe ahụ. ọkụ eletrik maka ebe obibi gị.
Induction Electric Furnace Refractory kpuchie Magnesia Ramming mass ihe
Refractory Magnesia Ramming mass material dị ka obere plasticity dị ala ma ọ bụ na ọ nweghị plasticity nke monolithic refractories, mejupụtara nchịkọta ntụgharị, ntụ ntụ na ihe mgbochi sitere na SongSanZhuang, nke a na-ekwu site n'ụzọ nke iji paụnd siri ike ọgụ.
Refractory Magnesia Gunning ihe maka ndozi oku nke oku Furnace Slag
Ihe eji eme magnesia Gunning eji magnesia na MgO-Cao mekota ya dika ihe ndi ozo, site na itinye ihe ndi ozo dika otutu, egbe nke egbe gunyere BOF.
Alumina silica ọkụ brick dị ala na obere porosity refractory ụrọ na-ere ọkụ brik maka ọkụ
Igwe klọp blọkịtị bụ ụdị ụrọ na-acha ọkụ, brọdụ na ụrọ na-akpụ ụrọ dịka akụrụngwa buru ibu na ịgbakwunye sillimanite na andalusite, ihe mgbochi dịka ọnụego ya, wee mepụta ngwaahịa ụrọ porosity dị ala mgbe agwakọchara, ịkpụzi ya, na ihicha. .
azs refractory block eji maka iko oku
A na-akpọkwa brick AZS mebiri emebi na electrofusion na blọgụ zirconium corundum, nke ihe mejupụtara kemịkalụ ya bụ Al2O3- zro2-sio2.AZS a na-eji blọọgụ arụ ọrụ bụ isi nke AZS, yana obere kaolinite na alumina ka agbakwunye na-ejikọ ọnụ na oke , ma mehie site na ịgwakọta, ịkpụ ya na ihicha .Ma, anyị na-amụta site na akụkụ ndị a nke iko ahụ na-eji brick AZS nke na-eme mmehie.
Igwe ọkụ Clay nke Porosity dị ala maka ite ọkụ
Ngwongwo igwe eji agba agba nke igwe eji agbazi osisi
Ngwaahịa a nwere ọrụ nke desulphurization na deoxidization. Ọ nwere ike belata suifide na oxysulfide na nchara achara dị ka nke kachasị. Ọ nwere ọrụ mkpuchi ihe na ịmịkọta nsonye na-abụghị ọla. Iji ngwaahịa a nwere ike inye aka melite ogo na uru nke ngwaahịa nchara.
Steel ladle Aluminom magnesium magnesium refractory castable
A na-eji akwa mmiri maka igwe igwe na ntọala iji mee mmiri nchara na nkedo n’ihu ite ọkụ, ọkụ eletrik ma ọ bụ ihe ntụgharị. Ihe ndọgharị dị ka oghere nke akwa ahụ nwere ike imeziwanye ihe eji egbu egbu ma mee ka ndụ ọrụ ladle dị ogologo.